Muwaadiniin Soomaali ah oo lagu dilay Weerar Dhabo gal ah oo ka dhacay Koonfurta Sudan | Curubo.com	Thursday, July 20th, 2017	Home
Muwaadiniin Soomaali ah oo lagu dilay Weerar Dhabo gal ah oo ka dhacay Koonfurta Sudan
Nov 21, 2015 - Comments off	Wararka ka imaanaya Koonfurta Sudan ayaa sheegaya in Weerar Kooxo hubeesan ay ku qaadeen gaari bas ah lagu dilay Shan qof oo labo kamid ah la sheegay in ay ahaayeen Muwaadiniin u dhashay Dalka Soomaaliya.
Kooxo hubeesan ayaa Khamiistii lasoo dhaafay waxa ay rasaas ooda uga qaadeen Gaari bas ah oo ka baxay Magaalada Jubba Caasimadda dalka Koonfurta Suudaan, waxa uuna gaarigan la weeraray uu kusii jeeday Degmada Nimule.
Kolonel Philip Aguer, oo ah Afhayeen u hadlay Milatariga Dalka Koonfurta Sudan ayaa sheegay in ugu yaraan shan qof oo labo kamid ah ay yihiin Soomaali lagu dilay Weerarka dhabo galka ah ee lagu qaaday Gaariga baska ah.
Afhayeenka ayaa tilmaamay in lagu daba jiro kooxihii weerarka fuliyay, waxa uuna tilmaamay in ciidamada amaanka ay hada si buuxda u xaqiijiyeen amaanka Wada ay maraan Basaska kusii jeeda Xuduuda Dalka Uganda.
Dalka Koonfurta Sudan oo wali xaalad aan saldhigan ku jira ayaa mararka qaarkood waxaa ka dhaca weeraro ay waxyeelo kasoo gaarto dadka ajaaniibta ah ee dalkaasi kunool gaar ahaan kuwa ganacsiga u tagay Dalkaasi.